Забур 19 CARS - Nnwom 19 ASCB
1Ɔsoro ka Onyankopɔn animuonyam ho asɛm!
Ewiem pae mu ka ne nsa ano adwuma,
2Ɛda biara, wɔkasa;
anadwo biara, wɔkyerɛ nimdeɛ.
3Ɔkasa anaa nsɛm nnim
na wɔnnte wɔn nne.
4Nanso wɔn asɛm akɔduru asase so mmaa nyinaa,
wɔn nsɛm nso akɔduru asase ano.
Wɔ ɔsoro hɔ, wasi ntomadan ama owia,
5a ɔte sɛ ayeforɔkunu a ɔfiri ne pia mu,
te sɛ ɔbrane a ne ho pere no sɛ ɔbɛtu ne mmirika.
6Ɛpue wɔ ɔsoro fa baabi
na atwa ne ho akɔsi ano;
biribiara nhinta ne hyeɛ.
ɛkanyane ɔkra no.
Ahotosoɔ wɔ Awurade nhyehyɛeɛ mu,
ɛma deɛ ɔnnim nyansa hunu nyansa.
8Awurade ahyɛdeɛ tene;
ɛma akoma mu anigyeɛ.
na ɛbue ani.
9Awurade suro yɛ kronn,
Awurade mmaransɛm yɛ nokorɛ
na ne nyinaa tene.
10Ɛsom bo sene sikakɔkɔɔ
sene sikakɔkɔɔ amapa mpo;
ɛyɛ dɛ sene ɛwoɔ,
sene ɛwoɔ a ɛfiri ɛwokyɛm mu.
11Wɔnam so bɔ wo ɔsomfoɔ kɔkɔ sɛ,
ɛsodie so akatua yɛ bebree.
12Hwan na ɔhunu nʼankasa mfomsoɔ?
Fa me mfomsoɔ a ahinta kyɛ me.
13Bɔ wʼakoa ho ban firi ɔboayɛ bɔne ho,
a merenni fɔ wɔ bɔne akɛseɛ ho.
14Ma mʼanom nsɛm ne mʼakoma mu mpaeɛbɔ
nyɛ deɛ ɛsɔ wʼani, Ao Awurade
me Botan ne me Gyefoɔ.
ASCB : Nnwom 19